Otu esi ahụ onye na-echekwa foto Instagram m | Androidsis
Otu esi achọpụta onye na-echekwa foto Instagram m
Nerea Pereira | | Nkuzi
Ngwa ahụ Instagram ọ na-achịkwa ịnọ n'elu, ma mee ya site n'itinye atụmatụ ọhụrụ na ngwá ọrụ ndị na-enye aka dị ukwuu n'ịmepụta foto na vidiyo dị egwu. Na mgbakwunye, ọ bụkwa ụzọ dị mma isi soro arụsị anyị, na ọtụtụ ndị na-eme ihe na-enyere anyị aka n'akụkụ dị iche iche, dị ka ịma mma na ụwa nke ejiji.
Netwọk mmekọrịta a maara ka ọ ga-esi nọrọ n'elu ruo ọtụtụ afọ, ebe ọ bụ na e kere ya na 2010, na n'ime ihe dị ka afọ abụọ, o nweelarị ihe karịrị 100 nde ndị ọrụ. Na mbụ, N'ime ya naanị ị nwere ike bipụta onyonyo nwere usoro ụfọdụ, ma ka oge na-aga, agbakwunyere mbipụta vidiyo nke nkeji iri na ise., nke na-agbatịkwu ruo nkeji oge, ka emechaa nweta mbipụta vidiyo na-enweghị oke, nke a maara dị ka IGTV.
1 Obere akụkọ ihe mere eme nke Instagram
2 Enwere ike ịhụ onye na-echekwa foto Instagram m?
Obere akụkọ ihe mere eme nke Instagram
Ikpo okwu a na-arụkwa ọrụ iji zụlite ọrụ ọhụrụ, nke a maara dị ka ndị na-emepụta ihe, bụ ndị, na-enwe ọganihu dị ukwuu na netwọk mmekọrịta a, jisiri ike rụọ ọrụ mgbasa ozi ngwaahịa na nhọrọ ndị ọzọ, dị ka njem, ngwa ngwaahịa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ihe dị ka ọ ga-abụ naanị otu netwọk mmekọrịta, nke dị ka ndị ọzọ ga-ejedebe na echefu echefu, taa bụ otu n'ime ndị kasị ibu. N'ezie, ịzụrụ Mark Zuckerberg dị ya mma, bụ onye site na ịkụ nzọ na ya, mere ka ọ too karịa.
Asọmpi emebeghị ka oge na-aga, mana ekele Zuckerberg, ọ pụtala n'ihu. Ihe atụ anyị nwere na ọdịdị nke Snapchat, ngwa nke ị nwere ike ibipụta foto ma ọ bụ vidiyo dị mkpirikpi nke were awa 24 wee pụọ. Ọ bụghị naanị nke ahụ, o meriri tumadi n'ihi mmetụta ya, ihe a na-ahụbeghị ruo mgbe ahụ.
N'ịbụ onye chere na ọjụjụ ire ere ihu, Zuckerberg gara, wee mee nṅomi mara mma maka netwọk mmekọrịta ya, na Instagram bụ ebe ọ dabara nke ọma. Kedu ihe ọzọ, ruo taa, Akụkọ Instagram na-aga n'ihu na-enweta nkwalite. N'ime ha ị nwere ike ọ bụghị naanị were nzacha see foto ma ọ bụ bipụta vidiyo, mana ị nwekwara ọtụtụ ngwaọrụ iji nwee ike ibipụta ọdịnaya okike karịa yana masịrị gị. Ị nwere Boomerang, ohere nke nduzi, enweghị aka, Imepụta na ndị ọzọ. Ọbụghị ikwu na ugbu a enwere ndị na-emepụta ihe nzacha, yabụ ị nwere ike ịgbalị ịgbanwe agba ntutu gị, agba anya na ọtụtụ ndị ọzọ.
Akụkọ ndị a ebisara awa 24 gara aga, mana na Instagram ha na-achọkarị ịga n'ihu. Yabụ ọ bụrụ na-amasị gị ụfọdụ n'ime akwụkwọ ndị a, ị nwere ike kaa ha akara dị ka egosipụtara, ma nwee obere ọba n'okpuru akụkọ ndụ gị, nke ga-anọ ebe ahụ ma hụ onye ọ bụla ruo mgbe ịchọrọ.
N'ezie, dị ka na Snapchat, ị pụrụ ịhụ ndị bụ ndị na-ahụ gị akụkọ, na ugbu a ị nwere a ọhụrụ nhọrọ, na nke ahụ bụ na-amasị ndị ọzọ' Akụkọ, na-ahụ onye na-amasị gị. Ma Ọ nwere ihe amaghị ama nke metụtara ndị ọrụ na-eji akaụntụ Instagram ha na-arụ ọrụ, nke ahụ bụ ịmara onye chekwara akwụkwọ gị ọ bụla. O doro anya na ọ bụrụ na mmadụ ewee nseta ihuenyo, ọ gaghị ekwe omume ịmara ọ gwụla ma onye ahụ agwa gị, mana na netwọk mmekọrịta, enwerekwa nhọrọ iji chekwaa akwụkwọ ndị ọzọ, na ọbụna nke gị.
A na-achịkọta ndị a na nchekwa echekwara, nke dị na ya ị nwekwara ike ịmepụta ọtụtụ nchekwa iji mee nhazi ọkwa, dịka ọmụmaatụ uwe ma ọ bụ ntụziaka. Mgbe ị dezie akaụntụ Instagram gị ka ọ bụrụ akaụntụ ụlọ ọrụ, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ nkọwa gbasara akwụkwọ gị, yabụ na ị gaghị ahụ naanị ole na ndị hụrụ foto ma ọ bụ vidiyo nke gị masịrị, mana ị ga-amakwa ole ha nwere. hụrụ ha, ya mere eleghara anya ma ọ bụ na-enweghị mmasị na ha.
Nke a bara uru nke ukwuu maka ndị na-arụ ọrụ na netwọk mmekọrịta a, n'ihi na ọ bụ ntụziaka iji mara ma ọdịnaya ha na-amasị ma ọ bụ na ọ bụghị, ma ọ bụrụ na oge kwesịrị ekwesị, na ha kwesịrị ime mgbanwe. Mana enwere oke nke bụ ezigbo isi ọwụwa, ya bụ na site na ịhazi akaụntụ gị dị ka ụlọ ọrụ, ị nwekwara ike mata mmadụ ole ejirila taabụ nchekwa na mbipụta ọ bụla.
Enwere ike ịhụ onye na-echekwa foto Instagram m?
N'adịghị ka mgbe ha na-enye gị dị ka, ebe ị nwere ike ịhụ onye ọ bụ, mgbe mmadụ na-azọpụta ihe ị na-apụghị ịma onye ọ bụ. Ma ọ bụghị naanị nke ahụ, mana ọ nweghị ụzọ ị ga-esi mara, ọ gwụla ma, dị ka mgbe ha jidere, ha gwara gị.
Ee, Inwe ike ịhụ mmadụ ole chekwara foto ma ọ bụ vidiyo gị nwere ike inye aka dị ukwuu, na o zuru ezu ịhazi akaụntụ gị dị ka otu ụlọ ọrụ wee hụ ọnụ ọgụgụ nke akwụkwọ gị ọ bụla.n Ma nke a anaghị akwụsị ebe a, ebe ọ bụ nhazi nke bara uru n'ezie, ma ị na-eji akaụntụ gị arụ ọrụ ma ọ bụ na ị chọrọ naanị. iji mara ma ndị na-eso ụzọ gị nwere mmasị na ihe ị biputere.
Akụkọ dịkwa oke mkpa, Dịkwa ka ị ga-enwe ike ịhụ ọnụọgụ ndị na-echekwa foto na vidiyo gị, ị ga-amata mmadụ ole kesara ndị ọrụ ndị ọzọ Akụkọ gị, na ndị kwụsịrị ịhụ akwụkwọ gị tupu oge eruo.
N'iburu n'uche ọchịchọ maka nkọwa ndị ọzọ, ọ ga-abụ na n'ime obere oge anyị ga-enwe ike ịchọpụta ndị na-echekwa foto anyị na Instagram bụ.
Dị ka ị hụla, anyị na-atụ egwu na taa ọ gaghị ekwe omume ịmara onye zọpụtara foto gị na Instagram, yabụ naanị ihe ị ga - eme bụ ichere ka ndị otu n'azụ mmepe nke netwọkụ mmekọrịta foto a na-ewu ewu na-ebu. wepụta mgbanwe ndị dị mkpa iji mee ka ọrụ a dị ụtọ nke nwere ike ịbịarute n'oge ọ bụla. Echegbula onwe gị, anyị ga-abụ ndị mbụ na-agwa gị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Otu esi achọpụta onye na-echekwa foto Instagram m
Otu esi achọta ndị mmadụ site na mkpanaka gị
Otu esi ahụ batrị AirPods na gam akporo